...उता दिलशोभा दुख्दा :: Press Chautari ::
दिलशोभा अर्थात आमाघरकी– आमा ।
यतिबेला बिभिन्न पत्र–पत्रिका र सामाजिक सञ्जालहरुमा छरपष्ट छिन् – 'दिलशोभा' । चिया पसल, दोकान र खुद्रा पसलहरुमा सस्तो रुपमा छाएकीछन्–दिलशोभा । चोक/गल्ली कतै भेट भयो कि सबैको मुखमा अघि लाग्छ यहि नाम –'दिलशोभा' ।
जुन समय दिलशोभा श्रेष्ठ यौन दुराचारको अभियोगमा समाचारको हेडलाइन हुँदै सामाजिक सञ्जालहरुमा छरिईन् उनी प्रतिको मेरो आस्था गरल्याम् र्गुलुम ढल्यो । र ढल्यो प्रेरणापुञ्जको अग्लो हिमाल । जसले बेस्सरी थिच्यो मलाई पनि । उकुस मुकुस भए । अनुत्तरित प्रश्नहरुले फन्फनी बेरीरहे मेरो मथिंगल ।
–कुन कुबिचारले अरायो ति –आमालाई ?
–कुन सत्य बोकेर समाचार लेखे ति –पत्रकारले ?
यता मेरो आन्दोलित मनमा एउटा सामान्य अनि सानो कदको आमा आउँछिन् । उनै दिलशोभा । जसले सडक पेटीका बृद्ध–बृद्धाहरुलाई उठाएर आश्रय दिईरहेकीछन् । मीठो मसिनो जे छ खुवाउँछिन् । खासै पढेकी छैनन् त्यसैले बोल्न त्यति भाँती पुराउँदिनन्। उनै आमालाई डेड बर्षअघि न्यूयोर्कको ज्याक्सन हाईटस्स्थित याक रेष्टुरेण्टमा भेट्ने अवसर जुरेको थियो । जहाँ परेलीका डिलमा आँशुका ढिक्का अड्याउँदै उनले भन्दै थिइन्– "मरेपछि श्राद्ध होइन, जिउँदै श्रद्धा गर्न सिकौं ।” उनका कुरा सुनेर थरथरी काँपेका आँत र सुक्सुकाउँदै गरेका ओठबाट स्वतःस्पूmर्त निस्केको सामुहिक आवाज थियो–'चुक्चुक् चुक्चुक्' ।
निरन्तर चुक्चुक् ....।
यो आवाज् मा मन बोलेको थियो । मस्तिष्क बोलेको थियो । हामी प्रायः मनलाई ढाँटेर मुखले बोल्छौं । आँखाले बोल्छौं । तर त्यहाँ त्यसो भएन ।
फेरी आमा बोलिन्– “आश्रम होइन, आश्रय दिऔं ।”
जीवनमा धेरै उत्तारचढाव भोगेकी दिलशोभा फेरी चर्चामा आइन् । यौण दुराचार आरोपको भारी बोकेर । एउटा टेलिफोनको संवादलाई लिएर उनीमाथि यत्रो समाचार बनाउनु अघि ति पत्रकारले एक शब्द किन सोधेनन् ? एकोहोरो संवादमा कुन शब्द, अंश र भावले दिलशोभा यौन दुराचारी ठहरिन्छन् ? समाचार आएपछि अनुगमन गर्न जाने सरकार कति निर्लज्ज ? सरकारले भनेको कानुनी दायरा भनेको के ? यत्तिका दिनसम्म सत्य तथ्य केलाउन नसक्ने कस्तो लाक्षी राज्य संयन्त्र ? कहाँ छन् मानव अधिकारकर्मीहरु ? कता गए नागरिक समाज ? दिलशोभाको पक्षमा वकालत गर्ने कोही छ ?
बोल्न भाँती नपुर्याउने एउटा आमामाथिको अन्य खप्न नसकेर देशबिदेशमा रहेका जन–जनले सोध्ने प्रश्न हुन् यी । यत्तिबेला सबैको एउटै प्रार्थना छ–“कसैगरी सत्य नलुकोस्” ।
जीवनको मध्यखण्डमा बिसाउँन नपाउँदै लोग्नेले दिलशोभा र उनकी छोरीलाई बीचैमा छोडी दिए । बिछोडको पीडा खप्न नसकेर आमाछोरीले कैयौं पल्ट आत्महत्याको असफल प्रयास गरे । तर दुःखी रैछिन ति दिलशोभा त अझ सयौं दुःख भोग्नु थियो, भोग्दैछिन् । अनि भोगीरहनेछिन् । सडक गल्लीहरुमा धुक्धुकी मात्रै भेटेर आमाघर भित्रीएका कैयौं बृद्ध/बृद्धाहरुको गुमूत सोहोरेर उनले जुन पुण्य कमाईन् त्यसको लेखा जोखा न राज्यले गरयो न सरकारले । अहिले प्रशासन औला ठडाउँदै भन्दैछ–
-“मापदण्ड पुगेन ।”
एउटा एकल आमाले अरुका दर्द र पीडा खप्न नसकेर बनाएको जीवनको भञ्ज्याङ्गमा कुन उज्यालो जुन खोज्नु ? अस्ताउन लागेको दुःखी जीवनहरुलाई केहिबेर सुस्ताउने साँघुरीमा कुन सीधा र सुगम बाटो खोज्नु खै ? त्यो आमाघर त कुनै सुविधा सम्पन्न तारे होटेल थिएन । कुनै सडकमा जीवनदेखि सधैंका लागि पछारिएकाहरुलाई उठाएर चिसो ठिहीबाट बाँकी जीवन ओभानो बनाउन भरमग्दुर प्रयासरत दिलशोभासँग सरकार र अनुगमन टोली सोध्दैछन्–ख्वोइ तिम्रो लाइसेन्स् ?
पाठक बृन्द , के ममताको कुनै लाईसेन्स हुन्छ र ? यसको कुनै मुल्य हुन्छ र ?
अचेल/यति बेला दिलशोभा आमाको मनमा के–के खेल्दो हो ? अर्काको गुमुत सोहोरेर कतै पछुतो पो मान्दैछिन् कि ? तर आमा हुनुको गर्वले ढक्क फुलेको छाती त्यत्ति कमजोर हुनु हुदैन ।
तिमी कमजोर छैनौं आमा । तिमीले हार्नु हुन्न । हुँदै हुन्न । यसरी आमाहरु नै हारेपछि तिम्रा दरसन्तानहरु कुन जीतको उन्मुत्तीमा रमाउन सक्छौं र ?
हो, तिमीलाई थिच्ने एउटा कालो आकास खस्यो आमा । तर त्यो आकास खस्न नपाउँदै तिम्रो पुण्यकर्मलाई सलाम गर्ने लाखौं जन तिम्रो शीरको आकास त के सारा ब्रम्हाण्ड थेग्न तयार छन् । तिमीलाई अन्ययबाट छेक्न आतुर छन् ।
हो त उता दिलशोभा दुख्दा यता लाखौं मनशोभाहरु धरधरी रोइरहेछन् । अनिँदो र आक्रोशित छन् मनमाया र मनबहादुरहरु । तिमीले त दिलै दियौं दिलशोभा । हाम्रो त केवल मन मात्रै त भो । मनभरी गुनासाका पहाड छन् । तिम्रो न्यायको सुखद समाचार बनेर अर्काे सुन्दर बिहानी पर्खिरहेकाछन् । पर्खिरहेकाछौं
शुक्रवार, २०७० फाल्गुन १६ गते २१:०० / Friday, Feb 28, 2014 9:00 pm
Nir Raj Rai, south Korea
Prasan sir...Namestelekh padhere mero pani man royo....